Owona mbala ulungileyo woNxweme oguqula i-lipstick ye-faep yobuhle | Banffee Makeup
I-BUFNEDE DEPUP-UMVUZO WOKUGQIBELA WOKUGQIBELA& Umzi-mveliso we-cosmetics ye-cosmetics
I-OEM / Inkqubo ye-ODM
I-Broncy kunye neBronter
I-shimmer / i-goshadow yemehlo
Ikhaya > Iimveliso > Iimveliso zemilebe > Ibalm yomlomo
I-Bip ye-BUDDE ye-BUGNAL BRURMRY DEALD-OLUNGISELELO OBUCHULE BOKUGQIBELA
I-Bannefni 2021 i-Wip ENTSHA YABASEBENZISELWANE KWISITHUBA ESEKLASI YENKULUMBUZO ZE-EXP
I-pigment ephezulu ye-vegan lip gloss ye-labiales ye-labiales ye-LIPGLOSS
I-Bannene Lipgloss isiseko se-LIP ye-Fight Lipstick
Owona mbala ulungileyo woNxweme oguqula i-lipstick ye-faep yobuhle
I-lipstick inemibala yokutshintsha kombala, umbala uya kutshintsha ngokuxhomekeke kubushushu bomlomo wakho, ngokunamanzi,
Ukunyibilikisa, iiBhelex, ziqulathe iivithamini E, izithako zendalo zenza ivumba elimnandi, zikhusele ngokukhuselekileyo imilebe yezaphulile kwaye inyibilike imilebe yakho.
I-OEM, i-ODM, inkonzo yeleyibhile yabucala
I-PayPal, i-Western Union, T / T
Thumela ingxelo ngoku
Inkampani ye-guangzzhou ye-guangnicou yenkampani ye-cosmetics yinkampani ye-cosmetics ye-cosmetics, iqela lethu likwisithili seJianggao, iBaiyin isithili, i-Guangzhou, apho kufuneka ishumi ngemizuzu yesikhululo seenqwelomoya saseGuangzhou. Inkampani yethu inamava amava kuphuhliso kunye nokuveliswa kwe-cosmetics, ukuba ne-fda& I-ISO 22716 ivunyiwe, kwaye neemveliso zethu ziye zathengiswa e-United States, Melika, iFrance, iRussia, i-Asia, kunye namazwe aseYurophu. Sihlala sihlolisisa iimarike ezintsha kwihlabathi liphela.
I-Bannodi Cosmetics inemisifundisane yokucoca i-GPP ye-GPP, kunye nengcali r&Iqela loyilo loyilo kunye neendlela eziphambili zemveliso ezenzekelayo. Sijongene nokuveliswa kwemveliso ye-lipstick, i-lipgloss, yamehlo, e-eyeliner kunye neemveliso zepowder. Kwaye sikwabonelela ngeenkonzo ze-ODM / OEE, izandla zakho kuthi, sinokuhamba nokukhula kwendlela yakho kuyo yonke indlela ekukhetheni imveliso, uyilo lokuyilolonga. Ukuba ufuna ukuthengisa imveliso ngokulula kwaye ngokukhawuleza, inkampani yethu iphinde yasungula i-cosmetics ye-cosmetics, zeziphi iimveliso ezigubungela zonke iindidi zokucoca iindleko zokuhlangabezana nazo zonke iimfuno zezinto ezifudukayo. I-Bickse Brand inokujoyina ukuhanjiswa, akukho ntambo, naliphi na ixesha lokubeka ii-odolo ngalo naliphi na ixesha lenqanawa.
Siza kuqhubeka sizibophelele ekuboneleleni abathengi ngeemveliso ezisemgangathweni, kwaye siya kuqhubeka sidala ixabiso eliphezulu kubathengi rhoqo.
Umvelisi wobungcali / umzi-mveliso we-cosmetics& Ukwenza i-china ukusukela ngo-2015
* Guangzhou Banffee Cosmetics Co., Ltd. Thina iye 7 iminyaka amava wokuphanda, a professionalI-OEM& Umvelisi we-ODM Cosmetics.
* Siqwalasele abathengi abadumileyo kwihlabathi liphela. Sigxininisa kuphuhliso, uyilo, imveliso, ukuthengisa kunye ne-chain yonikezo lweenkampani ze-cosmetics ephezulu.
* Sineqela lakho lophando lobugcisa kunye nophuhliso, iworkshop yemveliso enkulu ye-GMPC, izixhobo zanamhlanje ezizenzekelayo, kunye nokungeniswa kwento engeniswayo.
I-MSDS, i-GMPC, ISO
I-DHL / FedEx / TNT / i-UPS / okanye ngolwandle
I-Bannefenee yazibophelela ukwenza iimveliso ezintsha, ezicocekileyo nezicocekileyo, ezicocekileyo, ezinqwenelekayo, kwaye kulula ukuzifaka kubo bonke abantu, kwanabaqalayo. Yiba yinto oyithandayo kuwo onke amagcisa ezenza kunye nabafazi bale mihla. Iimveliso ze-BannigerE ziya kubonakala kwimiboniso yale mihla kunye nomxholo we "mbala wemveliso". Kwakhona, i-CANMPME iya kwenza i-faep "ye" "
Iinkcukacha ze-Bannicotho ze-banni
I-Auto-cinezela iPolder Powder
I-Homogegenizer enkulu nezenzekelayo ye-homogenizer
ube ne-r&I-Ofisi yeziko leD kunye neQela leeNjineli
Uvavanyo lwe-Microorganism, senze uthotho lweenkqubo zokuhlolisisa ezingqongqo nezomgangatho ezingqongqo kwiimveliso.
I-GRE-CHINC-FMPC yothuli-mahala i-Aseptic yendibano kunye nezixhobo zemveliso ezenzekelayo
1. Ngokukodwa singenise kwinkampani yamanye amazwe, umzekelo, i-pigment ephezulu ivela kwi-Emerican American American, ithambeka livela kwi-Clariaty Korea. Abanye banjenge-seppic, serdx, i-merck, toa kassei, kunye ne-Fotisns
2. Nikeza inkonzo ye-OEM / i-ODM, xhasa inkonzo yokumisa enye ukusuka kuyilo lweemveliso ezigqityiweyo
3. Ngokukodwa singenise kwinkampani yamanye amazwe, umzekelo, i-pigment ephezulu ivela kwi-Emerican American American, ithambeka livela kwi-Clariaty Korea. Abanye banjenge-seppic, serdx, i-Merck, i-Toa Kaselen, kunye ne-Fotissonss.Siliqela eliqeqeshiweyo kwaye linikezela ngenkonzo yeeyure ezingama-24
4. Sineziqinisekiso ezininzi ezinjengeSGS, i-FDA, NSF, iso9001, njalo njalo
Siyenza njani idibana kwaye ichaze i-gogal
Zonke zifakwe ngokwemigangatho yehlabathi yamazwe aphesheya. Iimveliso zethu zifumene iimakethi zombini nezangaphandle.
Ngoku bathumela ngaphandle ukuya kumazwe angama-500.
Intsimbi yentsimbi iqulethwe yityhubhu ebonakalayo ebonakalayo. Kulula ukusebenzisa i-bozzle yentsimbi. Inemibala ye-9 epheleleyo. Kungalula ukubona imibala ngolwandlalo olubonakalayo. Izareji ithe tye ngaphandle kwezithako eziyingozi. Imgqomo, inyibilikisi, kunye nokungasebenzi kwamanzi. Iphunga linambitha njengeziqhamo ezimnandi. Ifanelekile ukuba isetyenziswe yonke imozulu kwaye iya kunceda imilebe igcine inomtsalane kwaye inyanzelise usuku lonke.Abalinganiswa be-bip yentsimbi:I-pigment ephezulu, ebhalwe, i-pigroof, ukuhlala ixesha elide, ukuntywila, ukulungisa, i-vegan, i-vegan, i-vegan, i-vemmer, i-shushu, imbi, yendalo.
Abalinganiswa be-bip yentsimbi:I-pigment ephezulu, ebhalwe, i-pigroof, ukuhlala ixesha elide, ukuntywila, ukulungisa, i-vegan, i-vegan, i-vegan, i-vemmer, i-shushu, imbi, yendalo.IIMPENDULO zethu:1. Intengiso eshushu 5000Pcs esithumela ngaphandle inyanga nenyanga kwintengiso yehlabathi.2. Iimveliso ezikumgangatho ophezulu.3. Ixabiso lefektri efikelelekayo ngokuthe ngqo.4. Isampulu ifumaneka kwisitokhwe.5. Ukuhanjiswa ngokukhawuleza malunga neentsuku ezi-7.Wamkelekile ukunxibelelana nathi uku-odola! Enkosi!
Banffee wholsale ukhanye eliphezulu super ziyabuyiseleka mbala Vega iindevu isilungiseleli seglosi label yabucala DIY oyile matte lehoseyile
Le ukupholiswa lip iqulethwe yi ityhubhu ngaphaya. Kulula ukuyisebenzisa ne ngebrashi ethambileyo. It has iyonke imibala-25. Uyakwazi kulula ukubona imibala ngokusebenzisa ulwandlalo ngaphaya. I gcwalisa ke super ezigudileyo ngaphandle izithako ezinobungozi. Yinto bezinto, amafutha, kunye manzi. Ivumba nasongo iziqhamo amnandi. Yinto suit for bonke-yezulu ukusetyenziswa kwaye iya kunceda umlomo ugcine ebukekayo futhi amafutha imini yonke.Characters yale ukupholiswa lip:High sakhi, yabangazijongisisi nzulu, ngamanzi, njalo, amafutha, Hydrating, Ukulungiswa, Matte / bezinto / Shimmer, khaphukhaphu, Multi Colors, Vega, Organic, Ngonya Free, Non ekuvuseleleni, Soft, Iyingozi, Natural.
I-Banni yeNdawo yeNdawo ye-BlulLoss Lipgloss ephezulu ye-pigsmesti
Le ukupholiswa lip iqulethwe yi ityhubhu bhetyebhetye ngaphaya. Kulula ukuyisebenzisa umlomo Wotho. It has iyonke imibala 9. Uyakwazi kulula ukubona imibala ngokusebenzisa ulwandlalo ngaphaya. I gcwalisa ke super ezigudileyo ngaphandle izithako ezinobungozi. Yinto bezinto, amafutha, kunye manzi. Ivumba nasongo iziqhamo amnandi. Yinto suit for bonke-yezulu ukusetyenziswa kwaye iya kunceda umlomo ugcine ebukekayo futhi amafutha imini yonke.Characters yale ukupholiswa lip:High sakhi, yabangazijongisisi nzulu, ngamanzi, njalo, amafutha, Hydrating, Ukulungiswa, Matte / bezinto / Shimmer, khaphukhaphu, Multi Colors, Vega, Organic, Ngonya Free, Non ekuvuseleleni, Soft, Iyingozi, Natural.
I-Bannigle ye-BIP ye-BOB Sull OEM ODM I-WODM ye-WODM
I-Banffense Sersell Lipgloss yabucala Imeyili yabucala
C3817-818, UJiliaua Plaza, yingbibi Avenue,
Isithili saseHuadu, iGuangzhou.
Uqhagamshelo lwentengiso kwi